Sakafo sakafo | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Sakafo sakafo
Ny fitomboan'ny spinach amin'ny varavarankely isan-taona
Ny Spinach dia efa fantatry ny mpamboly sy ny cooks ho loharanom-pamokarana vitaminina, singa maromaro, proteinina ary legioma. Manana toetra ilaina izy io fa tsy vaovao ihany, fa koa amin'ny fomba fiasa isan-karazany: moka, voasikina ary mangatsiaka. Noho izany, ireo izay mikarakara sakafo ara-pahasalamana, mitombo ny gidro ao an-trano ary mizara an-tsitrapo ny zavatra niainany.
Ahoana ny fomba hambolena sy fikarakarana karokaroka ao amin'ny saha
Ny mahazatra ao amin'ny zaridaina eny amin'ny zaridaina sy ny fampiasana kulinar dia mampiseho tsara ny fambolena sy fiahiana amin'ny toe-javatra samihafa, anisan'izany ny toerana malalaka. Pumpkin: famaritana ny zaridaina an-jaridaina Ny vokatry ny fambolena voajanahary, tsy misy dikany na miavonavona, dia samy hafa amin'ny endrika, loko ary lanjany.
Nutmeg Pumpkin: famaritana sy sary ny karazana tsara indrindra ho an'ny fambolena
Ny squash bateria dia iray amin'ireo solontenan'ny mamy sy mamy indrindra amin'ny fianakaviana Pumpkin. Manana volon-koditra malefaka sy malefaka amin'ny loko mavomavo manitra izy ary misy fofona mahafinaritra. Noho izany, ny karazam-borona dia tena malaza amin'ny zaridaina. Fantatrao ve? Meksikana no toerana nahaterahan'ny melon.
Ny dill dia angamba ny vokatra faran'izay malaza indrindra any amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao. Dill dia mitombo amin'ny kontinanta rehetra, ankoatra ny bao. Ny bozaka dia tsy mahasosotra ary mitombo tsy amin'ny sehatra misokatra, fa ao an-trano ihany koa, toy ny vilany ao anaty fitoeran-drano eo amin'ny varavarankely. Fanamboaran-tsakafo am-bifotsy vao haingana Dari-na varimbazaha vao haingana no atomboka avy hatrany rehefa mamboly.
Kitapom-bary maitso: kalorie, firavaka, tombony ary fahasimbana
Fantatsika rehetra hatramin'ny fahazazany ny dikan'ny buckwheat ary manana hevitra tsara momba ny sereal izay nanaovana azy. Azo heverina fa vokatra mahasoa sy mahasoa ity, saingy mitombo izany mba ahafahana manatsara ny voam-bary mandritra ny fotoana lava, dia iharan'ny fitsaboana henjana izy ireo ka azonao hadinoina ny karazana properties izay malaza io voankazo io.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Sakafo sakafo